२०७६ कार्तिक १६ शनिबार ०९:३७:००
स्वर्ग देखेँ, नर्क पनि भोगेँ । यही जीवनमा, यसै धरतीमा । देवदूत पनि सशरीर मेरा सम्मुख आए, मलाई मुक्ति आश्रम पुर्‍याइदिन !
जीवनसँग मलाई कुनै गुनासो छैन । तर छक्क पर्छु, मुक्ति आश्रम जाने मेरो निर्णयलाई लिएर मानिसहरुका टीकाटिप्पणी सुन्दा । निरर्थक ! ती अनावश्यक र अतिरञ्जित प्रतिक्रियाप्रति म निस्पृह छु । तर तिनका असन्तुष्ट र आशावादी नजर मतिर मुखरित हुन्छन् । मानौं, म कुनै एलियन हुँ, ढिँट, भावहीन— जो यहाँका जीवातहरुको चिन्ता, चासो र सरोकार महसुस गर्नै सक्दैन; जसलाई अरुका समस्या र पीडाप्रति कुनै वास्तै छैन । हताशावश सायद ती सोच्ता हुन्, “...मान्छे बूढो भए निहुँ खोज्छ ।” आहान त्यसै बन्या हो र !
अनौठो त मलाई यो कृशकाय हालतमा थातथलो छाडी हजारौं माइल भौंतारिँदै मुक्ति आश्रमको दैलो ढकढक्याउन पुग्नुपर्ने परिबन्द र आफ्नो नियतिप्रति लाग्छ । यी सबैबाट बेखबरझैं प्रक्षेपित र लाञ्छित अनेक तर्कहरु मलाई बेतुक लाग्छन् । किनकि आफ्नो भलो÷कुभलोको हेक्का राख्न म आफैं सक्षम छु— शारीरिक र मानसिक दुवै कोणबाट । धमिलिँदै गएका मेरा आँखाले यो संसारलाई छाम्न थालेको पनि शताब्दी नाघिसक्यो । दुनियाँदारी राम्ररी बुझेको छु ।
वरिष्ठ प्राध्यापक मात्र होइन, वनस्पति वैज्ञानिकका रुपमा मैले ठूलै ख्याति आर्जन गरें । हरेक बुलन्द अवसर छोएँ, वनस्पतिसम्बन्धी जुनसुकै काममा मेरो सहयात्रा, सहकार्य, सहभागिता वा अनुमति अनिवार्य थियो कुनै समयमा । तर जिन्दगीले जेजे दिन्छ, ती सबै क्रमशः हर्दै लाँदो रहेछ आफैं । जीवनको डोरी तन्किँदै जाँदा मेरा प्रियजनहरु छुट्दै, हराउँदै र बिलाउँदै गए । मात्र म थिएँ अनि मेरो एकाकी जीवन । काम सकेर फर्किएपछि अपार्टमेन्टमा एक्लै पर्थें । अध्ययनअनुसन्धानका कर्मबाट दिमाग भट्किनासाथ त्यो एकाकीले लखेट्न थाल्थ्यो । बुढ्यौलीले गाँजेपछि मनको घोडा पनि चाँडै थाक्दो रहेछ, कतै भौंतारिन नसक्ने । कविता कोर्दै त्यसलाई छल्ने निष्फल कोसिस गर्थें । तर त्यो दुष्ट हरदम मैलाई ढुकिबसेको हुन्थ्यो टिल्ल हेर्दै ।
शतायु छिचोलेको पारितोषिकस्वरुप विश्वविद्यालयले मेरो अवैतनिक नोकरी हर्ने फर्मान सुनाउँदा म छाँगाबाट खसेतुल्य भएको थिएँ । नियमानुसार सेवानिवृत्त भएपछि विश्वविद्यालयले मलाई मानार्थ पद दिएको थियो यो । अर्थोपार्जन नभए पनि आफूले गरिआएका कर्मलाई त्यसबाट निरन्तरता दिन सक्थें । साताको कम्तीमा चार दिन म आफ्नो कार्यकक्षमा पुग्थें रेल वा सार्वजनिक बसहरु हुँदै झन्डै डेढ घण्टा लामो दूरी छिचोलेर ।
मसँग थियो त केवल मैले आर्जेको ज्ञान, सीप, दक्षता र मेरो पेसा । फगत एउटा नोकरी थिएन त्यो । त्यो थियो मेरो जीवनाधार । मेरो जीवन हर्ने त्यो प्रपञ्चले जिन्दगीमा पहिलोपल्ट मलाई भित्रैदेखि हल्लायो । कातर हुँदै मैले स्वयम्लाई छाम्न खोजेँ । त्यसरी आवतजावत गरिरहनु मेरा निम्ति खतरापूर्ण हुने तिनको जिकिर थियो । जीवनभर सक्रिय म निष्क्रिय बस्न कसरी सक्थें ? आफ्नो अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएझैं लाग्यो, पहिलो पल्ट मलाई । सायद ती मलाई कोक्ल्याँटो ठान्थे । तर भाँडमै जाओस् तिनीहरुको सोच जस्तो लाग्थ्यो— अवाञ्छित सदाशयता र वाहियात चिन्ताहरु !
झन्डै दशक नाघिसकेको थियो टेनिससँग नाता टुटेको । शरीरले साथ नदिँदा थिएटरमा अभिनय गर्ने मेरो सोखले बिदा लिएको पनि धेरै भइसक्यो । अहिले बसिरहेको ‘सोसाइटी’मा कसैसँग मेरो सामाजिक सम्पर्क छैन । सिङ्गो पर्थ महानगरमै पनि मेरो सम्पर्कका व्यक्ति छैनन् भनिदिए फरक नपर्ला । जेजति छन्, ती सबै मेरो कार्यालय हाताभित्र भेटिने सहकर्मी, सहयोगी र विद्यार्थीहरु हुन् । तीसँग हाँसेर, जिस्किएर म एकछिन बोल्न सक्थें । तिनलाई फुर्सद होस्÷नहोस्, मेरा गलफती सुन्ने मुडमा ती होऊन् वा नहोऊन्, अधिकारपूर्वक तिनीहरुसँग म गन्थनिन सक्थें ।
शारीरिक अवस्थाको कारण देखाउँदै विश्वविद्यालयले मलाई आफ्ना अनुसन्धान कार्यहरु घरबाटै निरन्तरता दिन सुझायो । मैले गरेका सेवा, योगदान सबै बिर्सिइए । मेरा उपलब्धि र दक्षता अझै काम लाग्दा नै थिए । तर म बेकामे बनाइएँ । तिरस्कृत हुनुको पीडाले छाती लुछ्न थाल्यो । परिचितहरुबाट टाढिएपछि निर्जन टापु जस्तो आफ्नो एक बेडरूमे अपार्टमेन्टभित्र गुम्सिएर बाँच्नुपर्ने भविष्य सम्झी म निसास्सिएँ, कहालिएँ, चिच्याएँ । र विश्वविद्यालयको त्यो बेतुके निर्णयलाई चुनौती दिएँ । विश्वभरिका न्यायप्रेमी जनसमुदायले मेरो पक्षमा आवाज उठाए । आफ्नो निर्णयबाट पछाडि फर्कंदै विश्वविद्यालयले मसँगको करार लम्ब्यायो । तर साविकको रहेन मेरो कार्यकक्ष । मैले घरबाट आउजाउ गर्दा लाग्ने दूरी आधा घट्ने गरी विश्वविद्यालय हाताभित्रै मलाई नयाँ कार्यकक्ष दिइयो । त्यही अवाञ्छित सदाशयता र वाहियात चिन्ता । तथापि, सापेक्षित रुपमा यो निर्णय केही सन्तोषप्रद थियो ।
संसारका विभिन्न देशमा छरिएका छन्, मेरा सन्ततिहरु । म आफ्नो दिनचर्या छाड्न सक्दिनँ, उनीहरु पनि आफ्नै जिन्दगीमा रमिरहेका होलान् । कुनै गुनासो छैन मलाई । यदाकदा भौतिक भेटघाट पनि जुर्छ, नत्र भर्चुअल देखभेट भइ नै रहन्छ । सन्तुष्ट छु, मात्र निष्क्रियताको तर्कनाले पिरोल्छ मलाई । मस्तिष्कले फुर्सद पाउनासाथ अपार्टमेन्टभित्र ढुकीबसेको एकाकी मलाई झम्टिन आइपुग्थ्यो— लुछ्न, चिथोर्न । त्यसको सम्झना मात्रले पनि सिरिङ्ग पाथ्र्यो । त्यसलाई छेउ पर्न नदिन प्रतिपल म आफैंसँग भागिरहन्थें । “बाँचिरहेको छु वा भागिरहेको ?” सोच्ता पनि असमञ्जसमा पर्थें । निस्सार जीवन र भगौडाको नियति सम्झँदा सयौंपल्ट मभित्र आत्महत्याको विचार नपलाएको होइन— तीनपल्ट त मैले आत्महत्याको असफल कोसिसै गरें ।
फेरि सोच्थेँ, “जीवन र जगत्का लागि मैले गर्न सक्ने अझै बाँकी छ । प्रकृतिले दिएको यो अनुपम अवसर, यो वरदानलाई नास्ने अधिकार मसँग छैन !” त्यो मेरो आत्मश्लाघा थियो वा आत्मवञ्चना ? अझै निश्चित हुन सकेको छैन ।
जसोतसो जीवनको गाडी धकेलिइरहेकै थियो । अनायास एक दिन आफ्नो अपार्टमेन्टभित्र म लडें । उठ्न गरेका भगीरथ प्रयत्नहरु निष्फल सावित भए । चिच्याएँ, कराएँ, रोएँ । तर सुनिदिने कोही थिएन । घिस्रिँदै मैले कुनै सञ्चार उपकरणसम्म पुग्ने चेष्टा गरें । स्नायुपुञ्ज र मांसपेसीले मलाई साथ दिएनन् ।
विगत एकडेढ वर्षदेखि मेरो स्वास्थ्य अवस्था निकै खस्कँदै गयो । दृष्टि पनि धमिलिएको थियो । उठ्ने उहापोहमा गरेका हरेक प्रयत्नहरुसँगै मेरो शरीर झन्झन् शिथिल हुँदै गयो । अन्ततः मैले आत्मसमर्पण गरें, उठ्ने प्रयत्नहरु विसर्जित गरेर । मांसपेसीभित्रको कम्पन, हृदयको धड्कन, श्वासप्रश्वासको लय र आँखाको झिमझिमबाहेक मेरो सम्पूर्ण शरीर निश्चल भयो । पसिनाको चिसो महसुस गरें । मोक्षको अपेक्षामा एउटा सन्तुष्टि पनि थियो । तर मप्रति अवाञ्छित सदाशयता र वाहियात चिन्ता प्रकट गर्ने मनुवाहरुको तस्बिर मस्तिष्कमा तैरिँदा मलाई झनक्क रिस उठ्यो— कहाँ हराए यति बेला ती ? मेरो जीवनमा केही बदलियो तिनको सदाशयता र चिन्ताले ? के बिग्रन्थ्यो म कुनै ‘खतरा’मै परेको भए पनि ? योभन्दा त श्रेयस्कर हुने थियो, त्यो दुर्भाग्य मेरा लागि !
दिन ढल्यो । रात बित्यो । चराको चिरबिरसँगै प्रभाती किरण सलबलाए । तर मेरो दशा बदलिएन । भुइँमै लम्पसार थिएँ— शिथिल, अशक्त, असहाय । आफूलाई यस्तो दीनहीन अवस्थामा पाउँदा मभित्रको मान्छे मर्माहत भयो । वास्तवमा शरीर कृशकाय भए पनि त्यसभित्रको मान्छे त थलिएको थिएन नि ! औधी प्रेम र सम्मान गर्छु म त्यसलाई । कठोर परिश्रम, सङ्घर्ष र तपको बलमा त्यसले एउटा शानदार जिन्दगी बाँच्यो । तर पछिल्लो केही घण्टाभित्र त्यो हजारौंपल्ट मर्‍यो । “यस्तो नियतिको हकदार होइन त्यो,” त्यस घडीमा लाग्यो, “बस्, अब पुग्यो !”
हो, आवश्यकताभन्दा बढी बाँचेँ म । तन्कँदो आयु सँगसँगै मेरो जीवनको आयतन, घनत्व र गुरूत्व झन्झन् खुम्चँदै गयो । जेजति पाउनु थियो, पाइसकेँ; जेजति फलाउनु थियो, मैले फलाइसकें । मेरो जीवनरुपी बागमा अब कुनै पूmल फुल्नेछैन, फल लाग्नेछैन । टुसाए पनि झारपात र ऐंजेरू मात्र टुसाउने हो । आफैंसँग भागेर, पलप्रतिपल मरेर बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले जीवनको शारीरिक र मानसिक बोझ बिसाउनु नै उत्तम हुनेछ ।
बिस्तारै मभित्र प्रतिरोधको भाव पलायो । फेरि सोचें— यस्तो अन्त्यको हकदार होइन म । सानदार जीवनको अन्त्य पनि सानदारै हुनुपर्छ ! हतास र निराश मनोदशामा आत्महत्याको बाटो रोज्ने कायरमा दरिनु मलाई किमार्थ मञ्जुर थिएन । यही अवस्थामा मेरो मृत्यु भए “दुर्घटना थियो वा आत्महत्या ?” भनेर मानिसहरुबीच फेरि तर्कवितर्क चल्ने निश्चित थियो । एक्लै जीवनयापन गरिरहेको व्यक्ति, आफ्नै अपार्टमेन्टमा लडेर उठ्न नसकेको तथ्य धेरैका निम्ति अपाच्य हुन्थ्यो नै । तीमध्ये केहीले मलाई दयाको पात्र बनाउँथे भने केहीले हेयको । अवाञ्छित सदाशयताको सिकार हुँदै मृत्युपर्यन्त ‘विचरा’ बन्थेँ म ।
“आई डिजर्भ बेटर ! म मुक्ति आश्रम जानेछु...,” मैले निश्चय गरें ।
मुक्ति आश्रमलाई झन्डै दुई दशकदेखि विकल्पका रुपमा हेरिरहेको थिएँ मैले । त्यसको सम्झनाले मात्र पनि मभित्र उत्साह सञ्चार गरायो । जीवनको आशा जागृत भयो ।
दुई दिनपश्चात् मेरो अपार्टमेन्टको दैलो घ¥याक्क उघ्रियो । म अर्धचेत थिएँ । हाउस किपरले भेटेर म अस्पताल पु¥याइएँ । एक्लै बस्न नहुने वा चौबीसै घण्टा नर्सहरुको पहरामा रहनुपर्ने सुझाव दिइयो । हरपल कसैको निगरानीमा रहनु मेरा निम्ति स्वीकार्य थिएन । केही अघि मात्र यसो भनिएको भए म बहुलाउँथें सायद । तर यति बेला मसँग मुक्ति आश्रम थियो । तिनको चेतावनीमिश्रित आग्रहलाई मैले हाँसोमा उडाइदिएँ ।
दुर्घटनाको केही दिनपश्चात् मैले आफ्नो एक सय चारौं जन्मदिनको केक काटें । र त्यही समारोहमा आफन्त र परिचितहरुमाझ मुक्ति आश्रम जाने उद्घोष गरें । त्यो निर्णय सुनेर एकछिन त उनीहरु हतप्रभ देखिए । तर बिस्तारै परिवारजनले मेरो निर्णयको सम्मान गरे ।
मुक्ति आश्रम जान मैले आवेदन दिएँ । स्वीकृत भयो मेरो आवेदन । मलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याइदिन एक सहयोगी आइपुगे । साक्षात् देवदूत लागे ती मलाई । त्यो लामो यात्रा मेरा निम्ति कष्टप्रद नहोस् भन्नेमा सजग थिए सायद उनी । ‘गो फन्ड मी’ नामक वेबसाइटमा उनले सहयोगको अपिल गरे । यो संसारमा मानवता मरिसकेको रहेनछ । ‘इकोनोमी क्लास’को टिकटलाई ‘बिजनेस क्लास’मा अपग्रेड गर्न सहृदयी मनुवाहरुले दिल खोलेर सहयोग गरे ।
तय भएकै दिन हामी विमानस्थल पुग्यौं । अस्ट्रेलियामा रहेका परिजनहरु मलाई बिदा गर्न पर्थ विमानस्थलमा उपस्थित भए । नातिनातिना र पनातिपनातिनाहरुले मलाई भावुक हुँदै सुमसुम्याए । यो न्यानोपनलाई मुटुभरि सँगालेर म फ्रान्सको बोर्दो पुगें, जहाँ परिजनहरुसँगै मैले केही दिन बिताएँ । उनीहरुसँग छुट्टिएर मुक्ति आश्रमतर्पm लम्किन खोज्दा गला अवरूद्ध भयो । तर भावनाको त्यो भुल्कोले मेरो मरूभूमीकृत जीवन रूझाउन सम्भव थिएन ।
गन्तव्य पहिल्याउँदै म स्विटजरल्यान्डको बाजल पुगें । युरोपका अन्य देश र अमेरिकामा रहेका बाँकी परिवारजन मसँग भेट्न त्यहीँ भेला भएका थिए । बाजल विश्वविद्यालयको बोटानिकल गार्डेनमा नातिनातिनाहरुसँग गफिँदै मैले केही घण्टा बिताएँ । मुक्ति आश्रमको मार्ग नरोजेको भए यो मौका मलाई मिल्ने थिएन । हात लागेको यो मौकालाई हृदयले स्वागत गर्दै अँजुलीमा थापें । जिन्दगीमा रहेसहेको कसर पनि पूरा भए जस्तो लाग्यो ।
मुक्ति आश्रम प्रवेश गर्ने पूर्वसन्ध्यामा म पत्रकारहरुद्वारा घेरिएको थिएँ । त्यो सानो कोठा देशीविदेशी पत्रकारहरुले खचाखच थियो । मुक्ति आश्रमको बाटो रोज्ने मेरो निर्णयले संसारको ध्यान खिचेको देख्ता म चकित परें । ‘एजिङ डिस्ग्रेसफुल्ली’ अङ्कित मेरो टिसर्टतर्फ हेर्दै ती निकै उत्सुक अनि जिज्ञासु देखिन्थे । सायद ती मेरो जीवनमा रहेका कमीको हिसाबकिताब गर्दै थिए वा कहाँबाट जिज्ञासा सुरू गर्ने भनेर अलमलिएका थिए । त्यस्तो केही निस्कने अपेक्षासहित तिनले प्रश्न गरे, सबैतिरबाट । उनीहरुको जिज्ञासा मेट्तै भनें, “अब म जीवनदेखि खुसी छैन, त्यसैले मर्न चाहन्छु । यथार्थमा यो दुःखी हुनुपर्ने कुरा होइन । यदि कसैलाई रोकिन्छ भने त्योचाहिँ दुःख हो । मेरो उमेरमा वा मभन्दा कम उमेरको कोही मर्न चाहन्छ भने उचित समयमा मृत्यु रोज्ने स्वतन्त्रता उसलाई हुनुपर्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि मेरो शारीरिक क्षमता र दृष्टि घट्तै गइरहेको छ । योभन्दा बढी म जीवनको निरन्तरता चाहन्नँ । यसलाई अन्त्य गर्ने मौका पाएकोमा खुसी छु म ।”
भोलिपल्ट हामी बाजलबाट अलि टाढा लिस्टलको मुक्ति आश्रम पुग्यौं, जहाँ मेरो तात्कालिक मनस्थिति परीक्षण गर्न केही सवालजवाफ भयो—
“तपाईंको मानसिक क्षमता ठीक छ ?”
“मलाई त्यस्तै लाग्छ, ठीक छु ।”
“तपाईंलाई कुनै असाध्य रोग लागेको छ ?”
“तपाईं कुनै असह्य पीडामा हुनुहुन्छ ?”
“के तपाईं डिप्रेसनबाट पीडित हुनुहुन्छ ?”
“तपाईंलाई कसैले उक्साएको हो, यो निर्णय लिन ?”
“के तपाईंको परिवारलाई जानकारी छ ?”
“के तपाईंका डाक्टर जानकार छन् ?”
“तपाईं यो कागजातमा दस्तखत गर्न सक्षम हुनुहुन्छ ?”
“मलाई विश्वास छ, सक्छु,” फिस्स हाँस्तै भनें । मसँगै उपस्थित अन्य मानिस पनि हाँसे । वातावरण अलि हलौं भयो । मैले कागजातमा हस्ताक्षर गरिदिएँ ।
अब सायद प्रक्रिया सुरू भयो । उनीहरु मलाई क्यानुलाको भल्भ अन गर्ने विधि सिकाउन थाले । त्यो काम मैले नै गर्नुपथ्र्यो, जसले मेरो शरीरमा औषधि इन्जेक्ट गथ्र्यो ।
अझै पनि म गन्तव्य भेटिरहेको थिइनँ । उनीहरु तयारीमै व्यस्त थिए । यो ढिलाइ र पट्यारलाग्दो प्रक्रियाले मलाई विचलित पार्दै थियो । मैले झर्कंदै सोधें, “अझ के रूँग्दै छौं, हामी ?”
मुक्तिको कामनामा व्यग्र थिएँ म । त्यही व्यग्रताबीच आफूबाट हुन गएको त्यस्तो व्यवहारले मलाई अलि खुम्च्यायो । अन्ततः प्रतीक्षाको घडी सकियो । सबै तयारी पूरा भयो । मेरो रोजाइमा बिथोविनको नवौं सिम्फोनी अड टू जोयको मधुर सङ्गीत गुन्जियो, कोठामा । शनैःशनैः मैले क्यानुलाको भल्भ ठेलें । उन्मुक्तिको आभासले मेरो रोमरोम पुलकित भयो । सन्तुष्टिको उच्छ्वाससँगै मेरो मुखबाट निस्कियो, “निकै समय लियो यसले !”
मेरा आँखा लोलाए । मीठो निदले गाँज्दै ल्यायो ।